Wikipédia dia tsy manome toky ny kalitao an'ny fahalanana izay misy ao aminy
Wikipedia dia tranonkala manolotra rakitsoratra iray misy fiaraha-miasa miaraka amina "lisansa maimaimpoana". Navoakan'ny fikambanan'olona ankolafy sy vondrona miasa maniry ny hanangana loharanom-pahalalahan'ny fahalalana an'olombelona ny Wikipedia. Ny rafitr'ity tetikasa ity dia ahafahan'ny olona manana Internet hanova ny atiny. Ka mba ho fantatrao fa tsy ny zavatra rehetra eto dia nohadinin'ny olona manam-pahaizana manokana hanome vaovao anao tanteraka sy marina ary azo itokisana.
Tsy midika koa izany fa tsy hahita fampahalalana marina sy sarobidy ao amin'ny Wikipedia ianao. Ny ankamaroan'ny fotoana ho hitanao izany. Na izany aza, 'Wikipedia dia tsy manome antoka ny maha-azo itokiana, ny fahitsiana, ny fahafenoana na ny fahatomomban'ny fampahalalana misy ao amin'ny tranokalany.' 'Ny votoatin'ny lahatsoratra tsirairay dia mety novaina, novokarin'ny olona na novan'ny olona iray ny hevitra dia tsy mifanandrify amin'ny fanjakana amin'ny fahalalana eo amin'ny sehatra voakasik'izany, na amin'ny tsy fitongilanana ilaina.
Tsy misy fijerin'ny mpinamana hafa
Ny fikambanan'i Wikipedia dia mikatsaka hatrany ny hisafidy sy hanasongadinana ireo lahatsoratra azo itokisana. Mba hanaovana izany dia mampiasa fitaovana toy ny pejy fanandramana farany fanovana sy pejy vaovao hanaraha-maso ny fampandrosoana ny votoatiny amin'izao fotoana izao sy ny fiovany. Na izany aza, ny famerenana amin'ny laoniny ny Wikipedia dia tsy nohodinin'ny mpizaha tany. Na iza na iza mpamaky afaka manitsy hadisoana na manao fikaon-dàlana ofisialy, fa ny mpamaky toa izany dia tsy adidy ara-dalàna hanaovana izany, ary noho izany ny fampahalalana rehetra vakiana eto dia tsy misy antoka azo atokisana amin'ny antony na hampiasa na inona na inona. izany. Na ny lahatsoratra izay nohosihin'ny famerenana fanaovan-tena tsy ara-potoana na nohamarinina tamin'ny alàlan'ny fizarana lahatsoratra momba ny kalitao aza dia mety ho namboarina tamim-pahamarinana tsy ara-potoana akory talohan'ny nijerena azy ireo. Tapa-kevitra ny hitandrina foana ireo famakiana ireo lahatsoratra.
Tsy hevitra matihanina
Raha mila toro-hevitra manokana ianao (ohatra, ny fitantanana ara-pitsaboana, ara-dalàna, ara-bola na risika), manantaha torohevitra amin'ny matihanina mahay sy manana fahalalana amin'ity sehatra ity.
Dernière modification le 28 Jolay 2020, à 12:15